မှော်ဆရာ့ အိပ်မက်များ: ကျွန်တော်နှင့် မသက်ဆိုင်သော အတွေးအခေါ်များ...
Preface (အဖွင့် စာမျက်နှာ)
Wizard Album(မှော်ဆရာ့ ပုံရိပ်များ)
ကျွန်တော်နှင့် မသက်ဆိုင်သော အတွေးအခေါ်များ...
၁။ ၀တ်အစား ၀တ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ခံယူချက် အတွေးခေါ်နှင့်ပတ်သက်၍
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး အများစုမှာ ပြည်ပရောက်ရင် ကိုယ့်လူမျိုး ၀တ်စားဆင်ယင်မှု နဲ့ပတ်သက်ရင် အယူလွဲတတ်ကျတယ်ဗျ၊ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် တော်သင့်ရုံ သေသေသပ်သပ်နဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်ဖို့ အဓိကကျပါတယ်၊ ဘယ်ဟာမ၀တ်ရဘူး ဘယ်ဟာဘဲဝတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုး ကျွန်တော်လုံးဝ မနှစ်သက်ပါဘူး၊ မှားနေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်၊ အဲ့ဒီအရပ်ဒေသနဲ့ မလိုက်ဘက်တဲ့ မြန်မာဆန်ဆန် အကျီင်္ လုံချည် ၀တ်စား ဆင်ယင်သူကို မှားယွင်းစွာ လှောင်ပြောင်ကျသည်မှာ အလွန်တရားမှားယွင်းသော အတွေးအခေါ်အယူအဆဖြစ်ပေသည်။
၂။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အယူသီးမှုနှင့် ခံယူမှုပြင်းထန်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍
လူမည်လျှင် မိ့မိ့တို့ ယုံကြည်သက်ဝင်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကိုစီရှိကျသည်၊ မိ့မိ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ် သောဘာသာအား သူတစ်ပါး ယုံကြည်သက်ဝင်အောင် တရာလွန်း ဟောပြော စည်းရုံးခြင်း၊ သူတစ်ပါးယုံကြည်ချက်အပေါ် တစ်ဖက်သက် ယူစတွေးခေါ်ခြင်း မလုပ်အပ် မလုပ်သင့်ပေ၊ လူတိုင်း လူတိုင်း ဘာသာတရား အဆုံးအမ လိုအပ်သည် ရှိအပ်ပါသည်၊ သို့ပါသော်လည်း လိုအပ်သည်ထက် ပိုလွန်းပါကလည်း မလိုလားအပ်သော အငြင်းပွားစရာ ကွဲလွဲစရာများ ကို ဖြေရှင်းရခက်တတ်ပါသည်။
၃။ ဗေဒင်၊ ရှေးဖြစ် အကြားအမြင် အပေါ် အလွန်အမင် ယုံကြည်သက်ဝင်ခံစားမှု
လူတိုင်း မိ့မိ့အကြောင်း မိ့မိ့ထက်ကို ပိုသိ့နိူင်သောသူကို ပိုအထင်ကြီးတတ်ပေသည်၊ ဤသည်မှာ ထိုသူတို့၏ ပညာပါရမီ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေမည်၊ သို့သော် ထိုကဲ့သို့သော အရာများအပေါ်တွင် အလွန်အမင်း စွဲလန်းပါကလည်း ဘ၀ပျက်မတတ် ခံစားရနိူင်ပေသည်၊ ဘုရားမှ လွဲ၍ မိ့မိ့ထက် မိ့မိ့အကြောင်းကို ပိုသိ့နိူင်သူ ရှိမည်ဟုမထင်ပါ၊ ပညာရှင်များကို စော်ကားခြင်းမဟုတ်၊ ယုတ္တိ တန်စွာ စဉ်းစား ဆင်ခြင် မှုသာဖြစ်ပါသည်။
၄။ သိမ်ငယ်နိမ့်ပါးသူများအပေါ် အထင်သေးအမြင်သေး မောက်မောက်မာမာ ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍
ဘာလဲဗျာ ဇာတ်နိမ့်၊ ဇာတ်မြင့်၊ အီဖဲလ် မျော်စင်ပေါ်တက်နေမှ အဆင့်အတန်းမြင့်မှာလား၊ ဖိုက်စတား ဟိုတယ် တက်စားမှလား၊ သိန်ထောင်ချီတဲ့ ဇိမ်ခံကား စီးနိူင်မှလား၊ နောက်ဆုံး လူဟာလူဘဲ ဆိုက်ကားဆရာလည်းလူဘဲ၊ သူဌေးသားလည်းလူဘဲ ပစ္စည်း ဥစ္စာ မကြွယ်ဝပေမဲ့ စိတ်ချမ်းသာဖို့ အရေးကြီးတယ်၊ အရမ်းချမ်းသားပြီ ဥစ္စာမာန မောက်မာနေရင် လူမဟုတ်ဘူး၊ အောက်ခြေလွတ်နေတဲ့ “လွတ်” ဖြစ်မယ်၊ အားရှိတိုင်း လေပေါ်မှာ နေချင်တာကိုးဗျ၊ မကြာသေးခင်ကဘဲ သန်းကြွယ်သူဌေး တစ်ယောက် ရှိသမျှအကုန်လှူပြီး စိတ်ချမ်းသာ အောင်နေတယ်ဆိုဘဲ၊ သူကဘ၀ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ရသွားလို့ဖြစ်မယ်၊ ပြောမယ့်သာပြောတယ် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း အတ္တတော့ သိပ်မကင်းပေဘူးဗျ၊ လူထဲက လူဘဲလေဗျာ၊ ဒါပေမဲ့ အတ္တမကြီးဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ပြောချင်တာကို လူတိုင်းကို လူလူသူသူ ဆက်ဆံတတ်ရင် ကိုယ်လည်း စိတ်ချမ်းသာသလို၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်ကျင်းလည်း အေးချမ်းမယ်ဗျာ။ လူကို လူလို ဆက်ဆံပေါင်းသင်း ဆက်ဆံနိူင်ကျပါစေ။
၅။ တစ်ပါးသူများအပေါ် အလွန်အမင်း ယုံကြည် စိတ်ချခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍
ခက်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်ကိုယ် ကျွန်တော် တော်တော်လေးကို စိတ်ကုန်တယ်။ လူတိုင်း လူတိုင်းကို ကိုယ်လိုချည်းဘဲတွေး ထင်တတ်တာကိုးက ကျွန်တော့်အားနည်းချက်ပါဗျာ၊ ကိုယ်က အကောင်းဆုံ့း အတတ်နိူင်ဆုံး ပေးဆပ်ပေမယ့်၊ ကိုယ့်ကို ကောင်းကောင်း ဆုံးမသွားတဲ့ သူတွေချည်းဘဲဗျ၊ အဲ့ဒီတော့လည်း နောင်များဆိုရင်တော့၊ အတတ်နိူင်ဆုံး အဲ့ဒီအတွေးအခေါ်မျိုးကို မစဉ်းစာ မတွေးခေါ်ဘဲ ချင့်ချိန်ရပါတော့မယ်။
၆။ မထားသင့်သော မာနများနှင့် ပတ်သက်၍
မာနဆိုတာ ကိုယ့်ကို ကိုယ် အခြောက်တိုက် အထင်ကြီးခြင်း တစ်မျိုးဟူ၍ ကျွန်တော်ခံစားမိ့ပါသည်။ မာနဟူလျှင် မကောင်းသော အချက်များသာ ပါဝင်စီးမျှောနေတတ်ပါသည်။ ပညာရှိမာန၊ ပညာမဲ့မာန ဟူ၍ လူများခေါ်ဝေါ်သမုတ်တတ်ကျပါသည်။ ပညတတ်ခြင်း၊ မတတ်ခြင်းသည် လူမှုပါတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့်သာ အဓိက တိုက်ရိုက် အချိုးကျ သက်ဆိုင်ပါသည်။ မိ့မိ့ကိုယ်တိုင် ကိုက ပညာ လိုလားလျှင်လည်း ထူးချွန် ဖြစ်မြောက်နိူင်စွမ်း လူတိုင်း လူတိုင်း အတွက် အသင့်ရှိနေပါသည်။ မာနမီး လောင်မြိုက်ပါက အဘယ်ကဲ့သို့သော ဆေးမျှ ကူညီခြင်းကာ မတတ်စွမ်းနိူင်ရာ။ မာနဆိုသည်ကာ အတ္တကြီးခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ ကိုယ်ပွားပင်ဖြစ်ပေတော့သည်။
၇။ မှားယွင်းသော အလှူဒါနများနှင့် ပတ်သက်၍
ရှိတဲ့လူတွေကလည်း ကိုယ့်ဂုဏ်တက်ဖို့ အတ္တကိုရှေ့တန်းတင်၊ ပကာသနတွေကို ဦးစားပေး သဒ္ဒါတရား ထက်သန် ချင်ယောင် ဆောင်ပြီး အလှူအတန်းကြီးများ ထမင်းရေချောင်းစီး မောင်းတီးပြီး လှူကျလေရဲ့၊ ကျွန်တော့်အထင်တော့ မုဆိုးမအိမ်က ထွက်လောင်းတဲ့ အာရုံ ဆွမ်းလောက် မမွန်မြတ်ပေးဘူးနော်၊ လှူကတည်းကိုက စေတနာသုံးတန် ပြတ်မှ မပြတ်ပေဘဲကိုးဗျ၊ ငါ့ရှိလို့ ငါလှူတာ ဆိုတာကလည်းပါသေးတယ်၊ စေတနာပါမှ လှူတာ ပိုထိ့ရောက်ပါတယ်၊ အလှူခံတဲ့ပုဂိုလ်ရော၊ အလှူပြုတဲ့သူပါ အဲ့ဒါမှ ဒါနမြောက်ပေမပေါ့ဗျ။ ခုတော့ဗျာ ခက်နေတာက အလှူခံတဲ့သူကလည်း ဒေါ်လာပါမှ၊ လှူတဲ့သူကလည်း ငါ့မိုလို့ ဒေါ်လာလှူတာ ဆိုသလိုမျိုးတွေ့တွေ့ နေရသကိုးဗျ၊ ခက်တော့ နေပြီ ဒေါ်လှရေ...
Posted by Nay Linn Aung at 1:40 AM
Nay Linn Aung
Current Readers !
Online Now! ()
ငါပိုက်ဆံအတွက် Blog မရေးဘူး... ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် မရေး...
စိတ်ဓာတ် Pollution (Ethick Pollution)
သင်္ကြန်ဘယ်လဲ ? သင်္ကြန်ဘာလဲ ?
Everythings 4U !
Multi Media Usage
Myanmar Blog Directory Entry Form